देशभर पाँच लाख जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दै सरकार :: Setopati
देशभर पाँच लाख जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दै सरकार
विवेक राई काठमाडौं, पुस १
सरकारले देशभर पाँच लाख जनाको 'एन्टिजेन' विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेका अनुसार अर्को साताबाट देशभर नै परीक्षण सुरू गरिने जनाकारी दिए।
‘जाडो सकिएपछि संक्रमण बढ्नसक्छ। यो बीचनमा विवाह तथा भीडभाड हुने कार्यहरू भएका छन्। मानिसहरूले ध्यान दिएका छैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले हामीले दुई सय भन्दा बढी केस भएका ठाउँमा व्यापक परीक्षण गर्ने तयारी गर्दैछौं।'
उनले सातै प्रदेशका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग परीक्षण सुरु गर्नका लागि आवश्यक छलफल चलिरहेको जनाए। आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी आगामी साताबाट परीक्षण सुरु गरिने निर्देशक पाण्डेले बताए। उनले सुरुवाती चरणमा प्रदेशका ठूला शहरमा परीक्षण गरिने जनाए।
‘सातै प्रदेशमा उच्चस्तरीय छलफल गरी प्रदेशलाई नै परीक्षणमा परिचालन गर्ने योजना छ। जसमा पहिलो चरणमा ठूला सहरमा परीक्षण गर्छौं,' पाण्डेले भने।
उनले देशभर पाँच लाख जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिने जनाए। त्यसका लागि हाल एक लाख वटा परीक्षण कीट रहेको र थप किट आउने क्रममा रहेको बताए।
महाशाखाले मंसिरको तेस्रो साता नै उपत्यकामा केन्द्रित रहेर एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको थियो। तर परीक्षणमा मानिसको आकर्षण नभएको ठहर गर्दै महाशाखाले दुई दिनमै परीक्षण स्थगित गरेको थियो।
पहिलो चरणमा तीन हजार जनाको परीक्षण गर्ने भनिए पनि १५ सय जनाको मात्र परीक्षण गरियो। त्यसपछि भने थप छलफल गरेर मात्र परीक्षणलाई पुनः निरन्तरता दिने महाशाखाले निर्णय गरेको थियो।
अब भने परीक्षणलाई उपत्यकासहित देशैभरका ठूला सहरमा व्यापक पारिने निर्देशक पाण्डेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। उपत्यकामा रोकिएको परीक्षण पनि आगामी साताबाटै सुरु गरिने उनले जनाए।
'उपत्यकाकाका सबै स्वास्थ्य संयोजक र प्रयोगशाला प्राविधिकलाई बोलाएर तीन चरणमा तालिम दिइसकेका छौं। अब परीक्षण कीट पनि सबैलाई वितरण गर्छौं,' उनले भने, 'काठमाडौंमा झन् धेरै परीक्षण गर्नुपर्छ। ५० प्रतिशत संक्रमित यहीँका छन् त्यसैले लाखौं मानिसको परीक्षण हुन्छ।'
उनले सुरुमा परीक्षण क-कस्को गर्ने भनेर प्राथमिकता तय गरिएको जनाए। जसमा 'क्लोज कन्ट्याक्ट' नजिकको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारी छन्।
यसरी एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिए पोजेटिभ र नेगेटिभ देखिए नेगेटिभ मानिने निर्देशक पाण्डेले बताए। तर नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिहरूमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण रहेको अवस्थामा भने थप यकिन गर्न ती व्यक्तिहरूको पिसिआर परीक्षण गरिने उनले जनाए।
पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिहरूलाई भने स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा टोलटोलमा अनुगमन समिति गठन गरिने भनिएको छ।
मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन डा. महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अनुगमन समिति गठन गर्ने काम उपत्यकाका स्थानीय तहमा धमाधम भइरहेको छ। उनले अब ती समितिमार्फत नै संक्रमितको व्यवस्थापन गरिने जनाए।
अब एन्टिजेन परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिलाई टोलमा रहेको उक्त अनुगमन समितिले १४ दिन घरमै ‘होम आइसोलेसन’ मा बस्न सुझाउँछ। साथै ती व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा बसे/नबसेको पनि उक्त समितिले नै निगरानी गर्छ।
यसरी सरकारले एन्टिजेन विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण व्यापक बनाउने भनिरहँदा विज्ञले भने एन्टिजेन परीक्षण विश्वसनीय नभएको भन्दै यसको प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। एन्टिजेन परीक्षणले भाइरसको जुन विन्दुलाई समात्नुपर्ने हो त्यसलाई समात्ने सम्भावना कम हुने भन्दै यसले पोजेटिभ व्यक्तिलाई पनि नेगेटिभ देखाइदिने उनीहरूको तर्क छ।
निर्देशक पाण्डेले भने पिसिआर जतिको प्रभावकारी नदेखिए पनि 'एन्टिजेटन टेस्ट' लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाको 'फुड एन्ड ड्रग एसोसिएसन' ले स्वीकृति दिएका कारण प्रयोगमा ल्याइएको बताए। साथै यसबाट परीक्षण छरितो र सुलभ पनि रहेको हुँदा अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको दाबी छ। उनले यो विधिबाट आधा घण्टामै नतिजा दिन सकिने जनाए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १, २०७७, ०३:५८:००